Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa ozi Qatar » Qatar Airways sonyeere IATA’s Turbulence Aware Platform
Airlines • Airport • Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • News • Akụkọ na -agbasa ozi Qatar • Ịrụ ọrụ • Technology • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Qatar Airways bụ ụgbọ elu Middle East mbụ sonyere na Turbulence Aware mgbe ebidola ya dị ka onye ọkwọ ụgbọ elu na Disemba 2018.
Nchekwa na nkwado gburugburu ebe obibi dị ka ihe kacha mkpa.
Ọ bụ onye mbụ nyere aka na data ọgbaghara na Middle East.
Ikekọrịta data gbasara ọgba aghara nwere ike inyere ụlọ ọrụ ụgbọ elu aka belata ikuku anwuru ọkụ.
Qatar Airways na ụgbọ elu Airtù Na-ahụ Maka Transportgbọ njem International (IATA) mara ọkwa na Qatar Airways ga -abụ ụgbọ elu mbụ na Middle East sonyere na ikpo okwu IATA Turbulence Aware.
IATA's Turbulence Aware na -enyere ndị ụgbọ elu aka belata mmetụta nke ọgba aghara, isi ihe na -akpata mmerụ ahụ ndị njem na ndị ọrụ ụgbọ mmiri na ọnụ ahịa mmanụ ọkụ dị elu kwa afọ, site na ijikọ na ịkekọrịta data ọgba aghara ahaghị nke ọtụtụ ụgbọ elu na -esonye na ọtụtụ puku ụgbọ elu kwa ụbọchị. Ezigbo oge, ozi ziri ezi na-enyere ndị ọkwọ ụgbọ elu na ndị na-ezipụ aka ịhọrọ ụzọ ụgbọ elu kacha mma, na-ezere ọgba aghara na ife efe na ọkwa kachasị mma iji bulie arụmọrụ mmanụ ma si otú a belata ikuku anwụrụ ọkụ CO2.
Qatar Airways bụ ụgbọ elu Middle East nke mbụ sonyere na atụmatụ Turbulence Aware mgbe ebido ya dị ka ọrụ ọkwọ ụgbọ elu na Disemba 2018. Turbulence Aware agbasawanyela ruo na ikpo okwu na-arụ ọrụ nke ọma na ihe karịrị 1,500 na-akọ ụgbọ elu na-ekerịta data ọgba aghara ozugbo. Site na ọkwa taa Qatar Airways ejirila ikpo okwu Turbulence Aware kwadebere ụgbọ elu 120, na -enwe atụmatụ ịgbasa na ụgbọ mmiri ya ndị ọzọ.
Onye isi ụlọ ọrụ Qatar Airways, Onye isi ala Mr. Akbar Al Baker kwuru, sị: “Site na nchekwa na nkwado gburugburu ebe obibi dị ka ihe kacha mkpa anyị, anyị na -egosi nkwa anyị maka iji ụgbọ elu eme ihe. Anyị na -aga n'ihu na -emepụta ihe ọhụrụ dị ka otu n'ime ndị na -anya ụgbọ elu ụwa site na ịnakwere ngwọta ọhụrụ a nke na -ejikọ teknụzụ na nnukwu data maka atụmatụ ụgbọ elu dị mma ọ bụghị naanị iji hụ na njem dị mma, kamakwa iji belata ọkụ ọkụ, n'aka nke ya, na -ebelata ikuku anwụrụ ọkụ anyị. Iji mee ka ofufe na -efe efe dị nchebe ma bụrụ nke na -adigide, ụlọ ọrụ ụgbọ elu ga -agbarịrị ụdị ihe ọhụrụ dijitalụ a, wee rụkọọ ọrụ ọnụ kerịta data ọgba aghara maka ịkọ amụma nke ọma. ”